पीएसएलबाट नेपाल फर्किएकाे सन्दिपले भने- सधै एउटै समय हुन्न ! - Nepal Cricket
पीएसएलबाट नेपाल फर्किएकाे सन्दिपले भने- सधै एउटै समय हुन्न !
पाकिस्तान सुपर लिग सकेर नेपाली युवा बलर सन्दिप लामिछाने स्वदेश फर्किएका सन्दिपले विदेशी लिगमा खेलेर ब्यक्तिगत रूपमा ठुलाे फाइदा भएकाे बताएका छन । उनले फ्रेन्चाइज लिगले आफ्नो लिडरसिप क्षमता बढ्नुका साथै सिक्ने मौका दिएको बताए । उनले कुनैपनि खेलाडीका लागि सधै एउटै समय नभएकाे बताउदै कहिले राम्राे हुन्छ कहिले नराम्राे हुने गरेकाे बताए । क्रिकेटमा नराम्राे हुँदा दुःख मान्नुपर्ने केहि नरहेकाे पनि बताए ।